Ihe mere anyị ji hụ n'anya na-azụta matraasi mmiri
Nke a ga - ebido akpa akpa recycling maka ịzụ ahịa kwa izu. Site na ozi a na-awụ akpata oyi na nso nso nso a, 1. Rillion 12 - tọn nke ice, m na-eche na anyị niile kwesịrị ịma jijiji maka mgbanwe ihu igwe. Ugbu a bụ oge anyị ga-eburu ibu ọrụ anyị, anyị ga-ewe obere ọrụ anyị nwere ike ime iji biri na mba a na ụwa a.
\_ "A na-etinye ya n'okpuru ya (Ryan \_" s). \_ "Ọ bụ akụkọ na-atọ ụtọ na ọrụ Ontario Hity Search Federation na-eji igwefoto na-eji igwe onyonyo ọ sịrị na ya enweghị ihe ọ bụla iji mee ihe ịrịba ama ahụ na akara ngosi.